Nhau Blog yeIndi Tagged "Art uye Tsika" - THE INDIAN FACE
Mifananidzo kubva Kubuda! Aya ndiwo gumi akanakisa mafoto emasaisai kusvika nhasi
Pasina kupokana, neyake kupikisa uye ziso rehunyanzvi, aya gumi vatori vemifananidzo ivo vakakwanisa kumutsa zvisingaenzaniswi manzwiro uye manzwiro nezvevadi vekunakidzwa, kufambisa, zvisikwa uye gungwa. Iwo mavara, magadzirirwo, uye maumbirwo ayo akaumbwa anoita kuti chero munhu awire murudo zvakatowanda nerunako rukuru runoviga pasi redu. Vazvizive pano!
Samo Vidic's inotyisa adventure kutora mifananidzo
Chiito kutora mifananidzo Samo Vidic Iyo ine simba zvechokwadi, ine simba uye inogadzira, asi zvakare inopemberera hupenyu uye inokurudzira nyaya dzekunakidzwa. Verenga pamusoro uye uwane zvinoshamisa zvemifananidzo basa re Samo vidic, ushingi mufananidzo.
Lucas Gilman uye yake inokatyamadza kudhirowa kutora mafoto
Rwendo harutombotiza isu kana tiri panguva chaiyo nenzvimbo. Izvi ndizvo chiitiko chemufoto kutora mifananidzo naLucas Gilman! Dzvanya uye uwane iye akanakisa mifananidzo uye mafoto maitiro.
ZAK KUNA KUSARA Surf Photitor
Zak Noyle anotarisirwa nhasi seimwe yeakanakisa vatambi vemifananidzo munyika. Kubva pachiwi cheO'ahu Island muHawaii, Zak inonyanya kuita surf uye kutora mifananidzo yemakungwa
Jaime de Diego uye yake adrenaline-yakazara nzira
Mifananidzo yangu inokwezva kutarisa (zvirinani ndizvo zvavanotaura) pamisiyano mikuru, kushandiswa kwemwenje nemanyorerwo akafundwa chaizvo. Zvinhu zvakakosha izvo zvandiri kuda kushanda navo, uye kuti mumaonero angu zvinogona kuita mutsauko.
Michael Clark: Technique uye Action Photography
Michael Clark ane hunyanzvi mumitambo yevadzvinyiriri, kudzika mhuka kusango uye kufamba, vachishandisa nzira dzakakosha dzekuona uye tekinoroji kuti vakwanise kutora mifananidzo yakanaka. Tarenda rake rakamuita kuti abudiswe pasi rese kune vamwe vanhu, vaparidzi, nezvekushambadzira, pakati pevamwe.
Chechu Arribas uye chiono chake cheBlueboarding
Ini ndinogara mutaundi riri muPyrenees apo nguva yechando yese ndinomirira nemoyo murefu kuti chando chibude kunakidzwa nekushanda; Ini ndinotsinhana basa rangu seLife Guardist Pistero muCerler ski resort uye seanonyanya kuita chiitiko.
Ndinogona kutaura ndisingatyi kuve ndisina mhosva kuti panguva yemwaka wechando ndiri kuita zviitiko zvechando zuva rega rega uye izvi zvinonditendera kuti ndishande munzeve dzese nzira dzinosanganisirwa mumitambo yechando.
Adrian Otero: weGalician skater uyo akagadzira yekutanga ibwe dombo
Adrián Otero: weGalician skater uyo akavaka dombo rekutanga dombo Adrián Otero ndiGalician nekuzvarwa uye stonemason uye purofesa wekuvezwa nebasa. Sezvo iyewo ari skater, ane zvese zvekuita sapiyona.